Yintoni i-nandrolone powder esetyenziselwa i-nandrolone inzuzo? | AASraw
Yintoni i-nandrolone powder esetyenziselwa i-nandrolone inzuzo?
/Blog/nandrolone/Yintoni i-nandrolone powder esetyenziselwa i-nandrolone inzuzo?
ezaposwa ngomhla 03 / 03 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo nandrolone.
Ingaba yin nandrolone ntoni?
Xa lixesha lobunzima kwaye ungeze ubunzima bekhwalithi kukho ukukhetha okucacileyo xa kuziwa kusetyenziso lwe-steroid. Enye yeenqweno zentando zonke ezininzi zokukhupha isichungechunge seNandrolone, ngoko uNandrolone nguye oyisisiseko solu chungechunge.
INandrolone yiyo anabolic steroid okwenzeka ngokwemvelo emzimbeni womntu ngamaqondo aphantsi kakhulu. I-Nandrolone ingasetyenziselwa imithi kodwa isetyenziswa rhoqo ngabadlali kunye nabadlali bomzimba ukuze bathuthukise ithoni ye-muscle kunye nokwandisa amazinga okuqina.
I-Nandrolone base powder
I-Nandrolone base powder yinto ebonakalayo ye-Nandrolone, idla ngokusetyenziswa ukugqiba i-Nandrolone DECA kunye neminye imikhiqizo yeeNandrolone. Xa ugqiba ukuthenga i-Nandrolone base powder online, kufuneka uqwalasele iinkcukacha ngokucophelela, njengobungcwele, intengo, kweenkonzo... I-Nandrolone base powder in AAS zingezantsi, ungayithatha ukuthumela.
IBakala: iBanga leMveliso
I-Formula ye-Molecular: C18H26O2
Isisindo somzimba: 274.4g
I-Melt Point: 120-125 ° C
Isitampu Sokugcina: -20 ° C Ifreezer
Umbala: Umpu omhlophe
Umyalelo omncinane: 10g
Iphakheji: Isikhwama se-Aluminium Foil okanye njengesicelo
Ixesha elihamba phambili lokuthumela: ngaphakathi kweeyure ze-12 emva kokufumana intlawulo
Izinketho zokuhlawula: i-Bitcoin, i-Westunion, i-Moneygram, ucingo lwebhanki
Amagama Amathambo E-Nandrolone
Njengazo zinto ezisemgangathweni zechungechunge lweNandrolone, lungafunyanwa ngenye indlela phantsi kwamagama eelwimi alandelayo:
Kutheni umqhubi athatha i-nandrolone powder?
Abaphangi basebenzisa i-anabolic steroids njenge-nandrolone ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo, kwaye ngokukodwa
1) ukubuyiswa kokuncedisa ukulimala
2) ukwandisa ubungakanani bemisipha, amandla kunye namandla
3) uqeqesho olunzima kwaye ixesha elide
4) ukwandisa ugonyamelo kunye nokukhuphisana
Indlela yeNandrolone yesenzo
Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi ifomu oyifumene nale ngxube, i-Nandrolone iyaziwa njenge-19-no-AAS, okunye eyaziwa ngokuba yi-anabolic androgenic steroid. Yintoni eyenza lo mvelisi we-19-akayikho into eyingqayizivele kukuba inokwenziwa ngokufanelekileyo kwinto efumaneka kwi-hormone ye testosterone. Oku kuthetha ukuba i-hormone ye testosterone ngaphandle kwekhabhoni kwindawo ye-19th. Ngenxa yokuba le nto encinane iyenzeka, ivumela ukuba izazinzulu zigcine iimpawu ezinamandla ze-testosterone, kodwa zenze i-steroid ehlukileyo ngokupheleleyo.
I-Nandrolone yindlela, indlela engaphezulu ngayo i-anabolic kunamanye amaninzi, kodwa i-anabolic encinane kune-testosterone kuphela. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa ne testosterone, yindlela ephantsi kwinqanaba le-androgenic. Ukuba ukhangela i-testosterone, inexabiso le-androgenic ye-100, ngelixa, nge-Nandrolone, unomlinganiselo we-37 kuphela. Lo umehluko omkhulu. Isizathu sokuba kutheni kakhulu ukuba i-compound inekhono lokuguqula i-dihydronandrolone yakho esikhundleni se-DHT yakho, e-dihydrotestosterone. Ngenxa yoko, i-Nandrolone inyanzeliseka ngokulula ngabantu abaninzi abadala. I-compound nayo ingasebenzi ngokubhekiselele kwimiphumo ye-estrogenic, kwaye kuphela i-20-pesenti ye-aromatase eyincinane ye-testosterone. Kwakhona kuqwalaselwa njenge-progesin esebenzayo kwaye inokuphucula okanye isebenzise ezinye iziphumo ezichaphazelekayo, kodwa ukuba wenza umgudu, unokuqinisekisa ukuba zilawulwa kwiimeko ezininzi.
I-Nandrolone inkulu kakhulu njenge-steroid kuba ine-kanhancer eninzi yokusebenza kunye neenzuzo ezibonakalayo. Oku kwenza ukuba i-androgen ibe yinto ehambelanayo. Inokumisa onke ama hormone amabi ukuba akhiqizwe njenge-glucocorticoids, inokuphakamisa amanqanaba akho e-IGF-1, i-nitrogen eninzi igcinwa, iiseli ezininzi zegazi ezibomvu, i-collagen eninzi, amathambo akho anamandla, kwaye unako ukukhawuleza inkqubo protein synthesis. Zonke ezi zifaka isandla ekukhuleni kwemisipha, ukuphucula nokuzuza ngamandla, ubunzima kunye nesivinini.
Xa kuziwa ku-Nandrolone, iziphumo ezichazwe ngasentla zifumaneka nakwamanye amaninzi. Nangona kunjalo, xa kuziwa ekugcinweni kwe-nitrogen, akukho namnye oza kufuphi neNandrolone ngokwemisebenzi yayo. Oku kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba izihlunu zethu zininzi ze-nitrogen kuwo, ngaphezu kwe-16-pesenti yezicubu zethu zesikhumba zine-nitrogen. Oku akubonakali konke okubalulekileyo, kodwa ukugcina i-anabolism phezu kwe-catabolism ibhekisela ku-nitrojeni engakanani ehlala kuyo kwiiscupu zethu. Ukuba ithe yapheliswa, oko kuthetha ukuba singena kwiindawo ezinobungakanani kwaye silahlekelwe yimpumelelo yamacandelo. Oku akuveki njengento enkulu, kodwa kuthetha ukuba i-collagen kunye neempawu zethumbo zethambo nazo ziyachaphazeleka ngokunjalo, kwaye yiyo apho uNandrolone edlala khona. Ayikho enye inhlanganisela inokuvuselela i-collagen kunye namathambo anjengeNandrolone, kwaye oku kuthetha ukuba kunenzuzo enkulu yokubuyiselwa xa kuthelekiswa namanye amaqumrhu enza ukuba ngcono kunabo bonke abanye ipakethe.
Ziziphi iinzuzo zeNandrolone powder?
Benzisa iNandrolone abanxibe impahla
I-Nandrolone isebenzayo ekukhuliseni ithoni ye-muscle nobuninzi. Ukwenza oku ngokukunceda umzimba usetyenzise nayiphi na iiprotheni ezidliwayo ngokufanelekileyo. Imiphumo ihlala yesikhashana kunye nokutya okunzulu kakhulu kwiprotheni kuyadingeka ukwakha ithoni ye-muscle ngokwaneleyo. I-Nandrolone inokunciphisa amaxesha okuphucula kwingozi kunye nokwandisa amazinga omgangatho ngokunciphisa ukukhathala emva kokusebenza. Ukwenza oku ngokunyusa izinga lokuhlutha kwe-muscle glycogen emva kolawulo olunzima lokuzilolonga. Oku kuthetha ukuba abadlali baqeqeshe ixesha elide ngaphandle kokukhathala. Ngokutsho kwewebhusayithi ye-Bodybuilders, i-nandrolone isebenzayo ekuhambiseni i-oksijeni ngegazi ngokukhawuleza kunokuba iqhelekileyo, ukukhawulezisa ixesha lokubuyisela ekukhuseleni nasekuncedeni izihlunu eziqhekekileyo kunye namathambo akonakalisiweyo ukuzilungisa. U-Nandrolone ukholelwa ukuba ukwandisa iimvakalelo zokhuphiswano kunye nobudlova, okuba luncedo kwimicimbi yezemidlalo. I-Nandrolone iphinde iphumelele ekunciphiseni amazinga amaninzi omzimba womzimba.
Nandrolone kwi-testosterone ephantsi
Ngokwe-website ye-Human Growth Hormone, i-nandrolone inokusebenza ekuphatheni ukulahleka kwe-testosterone njengoko isakheko seekhemikhali sisifana ne-hormone ye-testosterone. I-testosterone ephantsi idibaniswe namanqanaba aphezulu exinzelelo lwegazi kunye nokuhlaselwa kwentliziyo, ngokutsho kwintlangano yophando lwezokwelapha i-HGH Therapy. I-Nandrolone isetyenziselwa ukuphatha ukusilela kwi-scalp, isikhumba kunye neprotate njengoko kusebenza ngokuzibophezela kwi-androgen (i-hormone yesondo ejongene neempawu zesintu) ezifumana izicubu ze-muscle. Kwakhona kubeka uxinzelelo olulinganisekileyo kwisibindi kwaye lukhuthaze ubungakanani bomzimba jikelele.
Usetyenziso lwezoNyango lweNandrolone
I-Nandrolone nayo isetyenziselwe ukunyanga i-osteoporosis kubasetyhini, ngokutsho kweziko leengcali zezonyango. I-Nandrolone iphucula inxalenye ye-collagen emzimbeni kwaye ibuyisela ukulinganisela komzimba we-calcium ngokuqinisa amaminerali amathambo. I-Nandrolone nayo isetyenziselwe ukuphatha umdlavuza webele kunye nokunciphisa iimpawu zeGawulayo, ngokutsho kweWiley InterScience website. Ukwenza oku ngokukunceda ukukhutshwa kwamanqatha omzimba kunye namandla enyama ahlala ehlutha izigulane zikaGawulayo.
tags: ukuthenga i-nandrolone powder, nandrolone powder
Izinto ze-9 ofuna ukuzazi malunga neCarardarine powder !!! Thenga i-Masteron Propionate powder for bodybuilding: i-6 inyaniso kufuneka uyazi !!!
Boldenone i-Acetate powder
I-Testosterone i-powano-decanoate powder